Doorashada xubnaha Aqalka hoose ee Puntland oo dib u bilaabatay iyo saddex Kursi oo la doortay – STAR FM SOMALIA
Doorashada xubnaha Aqalka hoose ee Puntland oo dib u bilaabatay iyo saddex Kursi oo la doortay
Magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland waxaa saaka dib uga bilowday Doorashada Xubnaha Aqalka hoose ee deeganada Maamulkaasi, xilli muddooyinkii dambe hakad ay ku jirtay Doorashada.
Doorashada oo dib u bilaabatay waxaa la doortay Saddex Kursi oo ka mid noqon doona Kuraasta Aqalka hoose ee deeganada Puntland u matali doona Dowladda Federalka Somaliya.
Kursiga 23-aad ee Puntland u metelaya Aqalka Hoose oo ah kursiga beesha laylkase/ Reer Xirsi Muumin waxaa ku guuleystay Daahir Maxamed Muuse oo helay 36-cod , halka Maxamed Cabdilaahi Xasan uu helay 15 cod.
Kursigii 24-aad Aqalka hoose oo ah kursiga Laylkase/Maxamed Xasan, waxaa ku guulaystay Cabdi rashiid Gaboobe oo helay 27-cod halka Ciise Guraase helay 24-cod.
Sidoo kale waxaa la doortay Kursigii 25-aad ee Puntland Aqalka hoose oo kursiga beesha carab saalax, waxaa ku guulaysatay Sacdiya Samatar oo heshay 49-cod, halka Faadumo Maxamed Salaad heshay 1-cod.
Doorashada Xubnaha Aqalka hoose ayaa weli ka socota Magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland.
Madaxweynaha oo ku baaqay in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen